Libreoffice ၏အမြင်နှင့်ခံစားမှုအပေါ်ကျွန်ုပ်၏အမြင် Linux မှ
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်အရမျက်နှာပြင်ကို ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ ရုံးသုံး application များအတွက်စံချိန်စံညွှန်းဖြစ်သော application တစ်ခု၏အသုံးပြုမှုပုံစံကိုအဘယ်ကြောင့်ပြောင်းရသည်ကိုကျွန်ုပ်ရှာမတွေ့ပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro $ oft Office 2007 ကိုဖြန့်ချိလိုက်ခြင်းနှင့်၎င်း၏ user interface အသွင်အပြင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် menu-based graphical interfaces နှင့် toolbars များဟာအတိအကျဖြစ်ပုံရခြင်းကြောင့် "update" ကိုပူးတွဲတင်ပြရခြင်းဖြစ်သည်။ အဟောင်းတစ်ခုခု
vim interface ကိုအဟောင်းနှင့်ခေတ်နောက်ကျသည်ဟုမည်သူမြင်သနည်း။ အကယ်၍ vim သည်“ update” သို့ပြောင်းလဲပြီး nano interface နှင့်နီးကပ်စွာပြောင်းသွားပါကသင်ဘာပြောမည်နည်း။ ၎င်းသည်အဓိပ္ပါယ်မဲ့သောနှိုင်းယှဉ်မှုဖြစ်သော်လည်း vim ၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုလူသိများသည်။
ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရတာလဲ၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုပြောင်းလဲရတာလဲ။ အပြင်က relearn ရန်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ Firefox ကဲ့သို့ menus များသို့ပြန်သွားရန်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုတွေ့သည့်အခါတိုင်း interface ကိုပြောင်းလဲလိုပါက၎င်းတို့သည် menu ကိုခလုတ်တစ်ခုတည်းဖြင့်ပြုလုပ်သောအခါ။
ကျနော့်အမြင်အရ OS စနစ်နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ GTK + နှင့် KDE နှင့်အင်တာဖေ့စအဆင့်ရှိပေါင်းစည်းခြင်းသည်ကောင်းမွန်သည်။ icon set ၏အချက်အလက်များကြောင့်ထူးခြားမှုမရှိခြင်း၊ အတူတူပင်သုံးနိုင်ခြင်း စနစ်၏ကျန်များအတွက် icon များ။
LibreOffice လူများနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Firefox တွင်ကျွန်ုပ်မသုံးသော်လည်းပရိုဂရမ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Libreoffice ၏အသွင်အပြင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်
53 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Acute Versionitis ကိုတုန့်ပြန်ပါ။
ကောင်းပြီ၊ ကျနော့်အမြင်ကတော့သူတို့ဟာတစ်ခုခုလုပ်ရမယ်၊ စိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Desktop နဲ့ပေါင်းစည်းမှုကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရုံသာမကဘဲ၊ toolbar system ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားစဉ်မှာ space ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုခြင်းနှင့် ရိုးရှင်းသောစင်းထက်အိုင်ကွန်များကို function ဖြင့်ပိုမိုဖွဲ့စည်းထားသည်။
မရရှိလျှင်; that the right right space the at the the the the free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free is free free free free free is free free free free free free free is free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free free
PS: လူတွေရဲ့ဘာသာ၊ firefox စတိုင်။ ။ ငါကဒီဇိုင်နာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီလိုမျိုးငါမမြင်ပေမယ့်တစ်ယောက်ယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမယ်လို့ထင်တယ်။
သူတို့တွေဟာ GTK ရဲ့ကန့်သတ်ချက်များဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်၊ ဒါပေမယ့်တိုးတက်မှုကိုသင်မတွေ့ရှိဘူးဆိုရင် title bar မှာရှိတဲ့ save, undo, ... ခလုတ်များကိုအာကာသ၏အားသာချက်ကိုယူပြီးတိကျတဲ့အလုပ်များကိုအာကာသတစ်ခုအားမြှုပ်နှံရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ပေါင်းစပ်ခြင်း၏ပြtheနာဖြစ်သည်။ (မူလတန်း os မှ) granite မှကျေးဇူးတင်ပါသည်အဘယ်အရာကိုပြုမိနေသည်
သူနှင့်သဘောတူသူ ၃ ဦး ရှိသည်။ People လူများကိုအသုံးပြုခြင်းထက်အိုင်ကွန်များ + GTK / Qt အခင်းအကျင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုကောင်းသည် (အတွေးဖြင့်သတ်ဖြတ်ခြင်း) ။
PS: စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါယောင်္ကျားလေးဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်
အဘယ်သူမျှမကပြီးပြည့်စုံသော xD ဖြစ်ခဲ့သည်
ဆွေးနွေးမှုများတွင်မပါဝင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည် Libreoffice Mockup အသစ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည့်အပြုသဘောဆောင်သောယောက်ျားများကိုကူညီလိုခြင်းမရှိဘဲ၊ ၎င်းကိုဆောင်းပါးတစ်ခုတွင်ထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်လိုလားသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအင်္ဂါရပ်များအားယနေ့ခေတ်အသုံးပြုသောမော်နီတာများနှင့်အဓိပ္ပာယ်များစွာရှိသောကြောင့်ဘေးဖယ် dock သို့ယူရန်ကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ အကယ်၍ နှစ်ပေါင်းများစွာဒီဇိုင်းအတွက် Mac တွင်သုံးသောအရာများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုပါက၎င်းတို့ကိုရွှေ့ပြောင်းခြင်းသည် ပို၍ အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ထိပ်တန်းရာထူး။
ကျွန်တော့်ကိုအဘယ်အရာကမှမယုံကြည်စေပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲစနစ်အစား "gadget" ၏ Ergonomics interface နှင့်ဆင်တူသောဘယ်ဘက်အပေါ်နှင့်ဘယ်ဘက်အနားရှိ "ပလပ်စတစ်" ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်သည်ချွန်ထက်သော၊ ပို၍ တိကျသောမျဉ်းကြောင်းများကိုချွန်ထက်သောထောင့်များနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ အမှန်မှာအချို့သောအချိန်များအတွက်ဒီဇိုင်းလမ်းကြောင်းသည်ရန်လိုသောဖြောင့်သောလိုင်းများနှင့်ချွန်ထက်သောထောင့်များနှင့်တိကျစွာဖြစ်သည်။
KDE 4.10 အသစ်၏ပုံသဏ္lookာန်ကိုသင်ကြည့်မည်ဆိုလျှင်လက်ရှိပတ် ၀ န်းကျင်ရှိ Air "motif" နှင့်ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းပြီး Flat-bodi motif အသစ်များအကြားကြီးမားသောခြားနားချက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဤကဲ့သို့သောအပလီကေးရှင်းများနှင့်များစွာအလုပ်လုပ်သောကျွန်ုပ်အတွက်တော့၎င်းသည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောကုန်ထုတ်စွမ်းအား (အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏အလုပ်တွင်) အချိန်ဖြစ်လိုသည်။ M $ ကဲ့သို့သော“ ကောင်းမွန်သော” ဒီဇိုင်းသစ်များသည်လုံး ၀ ထုတ်လုပ်မှုမရှိပါ။ သူတို့ကအချိန်အများကြီးဖြုန်းတီးတယ်။ မင်းရဲ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုကတော်တော်လှတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့အမြင်က (အရောင်တွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ပေမဲ့)
မှန်ပါတယ်။ မင်းမှန်ကန်တယ်ဆိုတာငါသက်သေပြနိုင်တယ် ဥပမာအားဖြင့် Blender ကိုသာယူပါ၊ သို့သော် ၂.၄ အထိ Blender သည်အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်စက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သော, ဒါပေမယ့်တန်ဖိုးရှိရှိ။ ဗားရှင်း ၂.၅ တွင်ဤဆော့ဖ်ဝဲလ်အသုံးပြုသူများသည်အပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားကြောင့်သူတို့၏ပါးစပ်ထဲတွင်မကောင်းသောအရသာကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှငါကရန်အသုံးပြုရပြီ။
ငါ mockup ကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်လက်ချောင်းနဲ့ကြည့်ရင်ဒေါင်လိုက် menu က ICONS - ideograms - nested, ၃ ×3Array တွေထဲမှာတစ်ခုပါရှိပြီး ၇ ခုမှ ၈ ခုအထိရွေးချယ်ပြီးနောက်တစ်ခုအတွက်တော့ Ubuntu OS သုံးတဲ့အနာဂတ်တက်ဘလက်တွေပေါ်မှာ Unity ဒါမှမဟုတ်တခြားဒေါင်လိုက် dock ကိုသုံးမယ်၊ ငါထွက်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်၊ ဒေါင်လိုက် applications တွေကညာဘက်မှာရှိပြီး screen ရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ finger finger-dical menu ကရှိတယ်။ , လိုအပ်တဲ့အခါ, လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိနှစ် ဦး စလုံး။
သင်၏လုပ်ဆောင်မှုအတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ထည့် ၀ င်မှုများကြောင့်ယုံကြည်မှုရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေါင်လိုက်မီနူးတစ်ခုအားလက်ချောင်းဖြင့်ပုံသင်္ကေတများပါသော dock ပုံစံဖြင့်ဝေမျှနိုင်သည်ဟူသောအတွေးကိုတိုးတက်စေရန်ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
ငါ Gtk3နှင့်အတူ mockup ဖန်ဆင်းတော်မူ၏
////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////// //////////////
/////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////// /
/////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////// //////////
////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////
သို့သော် LibreOffice interface သည် VCL စာကြည့်တိုက်များပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ အရမ်းဆိုးတာကကျွန်တော် VCL သင်ခန်းစာမရခဲ့ဘူး။ ငါ LibreOffice ကိုယောက်ျားတွေကိုမေးခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့မှာ API မရှိဘူး
WO, သင်ကသူတို့ကို LO စာရင်းထဲထည့်ပြီးပြီလား ၎င်းတို့သည် Mac ၏မငြင်းနိုင်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများစွာရှိသည် - ကျွန်ုပ်တို့သည် GNOME ကဲ့သို့အားလုံးသာဖြစ်ပါက၎င်းတို့သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ပထမနှစ်ခုသည်ငါအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့် rooftops များမှကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်သန့်ရှင်းသော interface နှင့်အတူ ဒုတိယကရိုးရှင်းစွာကြော့ရှင်း exudes ။
သငျသညျပရိုဂရမ်ငယ်ကို run နိုင်ခဲ့ကြတယ်, အဲဒါကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး run ဖို့လွယ်ကူသည်။ Program ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ။ သို့သော်သင်၌ GNOME 3.6 နှင့် 64-bit architecture ရှိသည်
ငါ LibreOffice မှ Charles Schultz နှင့်သူ၏အဖွဲ့နှင့်အတူရှိသော်လည်း၎င်းကို Gtk 3.6 ၌ရေးထားသဖြင့်ဤကုဒ်သည်အသုံးမ ၀ င်ပါ။
LibreOffice ပရိုဂရမ်မာများသည် VCL စာကြည့်တိုက်များကိုသုံးသည်။
VCL မှ Michael Meeks အား API အတွက်တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း၎င်းတို့တွင် API မရှိပါ။ သူတို့လိုချင်ရင်အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်တယ်။ VCL Libraries ၏သင်ခန်းစာကိုကျွန်ုပ်တွေ့ပါက၎င်းကို graphical interface အသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်၎င်းအားဖိအားပေးရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ပြproblemနာတစ်ခုခုရှိရင်၊ သူတို့က interface ကိုတိုးတက်အောင်၊ အပြိုင်အဆိုင်လုပ်ဖို့၊ အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ကိုပြောင်းလိုက်ရင်ကောင်းမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကရေရှည်မှာထူးခြားတဲ့အခြားနည်းလမ်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့၊ ပုံမှန်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူတွေရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ abnword ဖြစ်မယ်၊ gnome text editor လို့ပြောင်းသင့်တယ်၊ အစကနေစစရာမလိုဘူး GTK ပေါ့။
wikipedia အရ VCL အရ၎င်းသည် pascal ၏ OOP ဖြစ်ပြီး၊ google တွင်ရှာဖွေခြင်းသည်ရလဒ်များရှိသည်ဟုထင်မြင်သော်လည်း၎င်းသည်ဝင်းဒိုးအတွက်လင်းပိုင်ဖြစ်သည်၊ ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်မသိပါ ။(
မိုက်ကရိုဆော့ဖ် "ဖဲကြိုး" သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများရှိသော်လည်း Unity HUD နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
Ribbon သည်အသုံးများသောရွေးချယ်စရာများအတွက် shortcut icon များဖန်တီးရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်အပြင်၊ အသုံးပြုခြင်းအတွက်ယခင်ကအသုံးမပြုဖူးသောသူများအတွက် icon များနှင့်ခေါင်းစဉ်များပါဝင်သော Contextual, dynamic နှင့်ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ထားသော menu များမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့် option သို့မဟုတ် feature ကိုရှာဖွေရန်အလွန်လွယ်ကူစေသည်။ ဒါဟာကွင်းလယ်ကနေရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ ရိုးရာမီနူးစနစ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုရန်တစ်ခါမျှမစဉ်းစားဖူးသည့်နေရာများတွင်သင်အကြိမ်များစွာလိုအပ်သည့်အင်္ဂါရပ်ကိုမတွေ့မချင်းအသိုက်မီနူးများတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာရေငုပ်နိုင်သည်။
မီနူးအသုံးပြုမှုပါရာဒိုင်းသည်နှစ် ၂၀ ခန့်ရှိကြောင်းသတိရသင့်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အစတွင်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သော်လည်းယနေ့ခေတ်တွင်ရောဂါလက္ခဏာများကိုပြသပြီးရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်နှင့်ခွဲငယ်ငယ်များရှိသည့် application ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မတူပါ။ ဥပမာ LibreOffice ထက်ပိုတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့်ရွေးစရာကိုကြိုတင်သိသောအခါအခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသော HUD သည်အလွန်အမင်းစွယ်စုံဖြစ်သည်။
Timex Sinclair၊ Sinclair Spectrum, Commodore 64, MSX နှင့် MSX2 နှင့် Atari 810XL စသောကလေးငယ်များ မှစ၍ စနစ်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် floppy drive နှင့်ဂရပ်ဖစ်မော်နီတာပါ ၀ င်သောပထမ ဦး ဆုံး Apple Macintosh၊ အစိမ်းရောင်ဖော့စဖရပ်ကိုငါ 2-, Hercules နှင့်အတူ 8086 နှင့်စတင်သောအခါ SVGA, 286, Pentium, ကက်ဆက်ပရိုဂရမ်များကိုတင်ရန်နှင့် 386'5 / 1 နှင့် 4'3 / 1 floppies တန်ချိန်ကိုသုံးသောအခါခေါင်းကို azimuth ကိုချိန်ညှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး2meg HD မပေါ်မီ။
အစဉ်အလာမီနူးသည်နောက်ဆုံးတွင်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည် fallback option တစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိရန်အဆင်ပြေမည်ဖြစ်သော်လည်းလက်တွေ့တွင်ယနေ့ရှိသည့်နည်းပညာများနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေများကြောင့်၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကန့်သတ်ရန်မသင့်လျော်ပါ။ ။
သို့သော် menu စနစ်ဖြင့်အမှန်တကယ်ဆွဲဆောင်ခံရသူများကိုအခြားသူများအားကယ်တင်ခြင်းသည်ပြောင်းလဲမှုများအသစ်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်နှင့်အသစ်သောအလေ့အကျင့်ကောင်းများကိုသဘောပေါက်နားလည်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အယူအဆများကိုတစ်ခါမျှမမြင်ဖူးသော်လည်း၊ အချို့သောအဆုံးအောင်မြင်ရန်။
Pavlov သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၏ပျမ်းမျှကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူအတွက်ပွဲခံခြင်းဖြစ်ရမည်။ : D
ငါဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားသောအရာကိုမျှဝေ, အလုပ်အတွက်အသုံးပြုသော application ကိုကျွန်တော်ပြသချင်တယ်ဆိုရင်, ငါတို့ကပြသချင်တယ်ဆိုရင်, သမ္မာသတိရှိကြလော့ဂရပ်ဖစ်ရှိရမည်, ငါတို့အလှဆင်ကြောင့်သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီကသူတို့ရှိသည်ချင်သောရှုထောင့်ကိုရွေးချယ်, ထိုရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။
ငါသိလို။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုရှင်းပြပါက LibreOffice 3.6 ရှိ Gnome မဟုတ်ဘဲ KDE interface ရှိရမည်။
သတိပြုရမည်မှာ MacOS သည် PROFESSIONAL အလုပ်အတွက်သာမကဘဲဆွဲဆောင်မှုရှိသောဂရပ်ဖစ်ပါရှိပြီးအသုံးဝင်မှုရှိစေရန် (သို့) ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမှလည်းဖယ်ရှားပေးသည်။ တကယ်တော့ Mac သည်ဂရပ်ဖစ်နှင့်မာလ်တီမီဒီယာလုပ်ငန်းများတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာခေါင်းဆောင်ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် Windows0သည်အသုံးဝင်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမှမဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့် taskbar ပါရာဒိုင်းအသစ်ကိုယူဆောင်ခြင်းအပြင်၎င်း၏ယခင်ဗားရှင်းများနှင့်လည်းအဆင်တန်ဆာပြုလုပ်ထားသည်။
အသုံးဝင်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသည်အလှတရားနှင့်အဘယ်ကြောင့်တိုက်မိသည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ p, F / LOSS ကမ္ဘာရှိဤအယူအဆများ၏အကောင်းဆုံးမိတ်သဟာယပုံနမူနာမှာ KDE SC ဖြစ်သည်။
သေချာတာပေါ့၊ FWM၊ IceWM (သို့) WindowsManagers ကိုသုံးပြီးဝါကြွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေတာကြောင့်တကယ်ကိုမှောင်မိုက်ပြီးအရမ်းရုပ်ဆိုးတာကသူတို့ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိဖွဲ့စည်းရတယ်၊
ငါ့သူငယ်ချင်း everything အရာအားလုံးရှိတယ်
“ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့အလှဆင်တယ်၊ လူတိုင်းကသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုရွေးချယ်ကြတယ်၊ ဒါကရွေးချယ်စရာတွေအတွက်။ ”
နှင့်ဤလယ်ပြင်၌ GNU / Linux ကို, ပြိုင်ဘက်ကင်းသည်သုံးစွဲသူများမှပါဝါ !!!
၀ င်းဒိုးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု၏အလှဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေသည်ဟာသတစ်ခုဖြစ်သည်၊ Mac ၏နောက်ကွယ်ရှိခြင်းသည်မရှိ (နောက်ခံပုံများနှင့် dock ၏အနေအထားပြောင်းလဲမှု။ aqua for X Graphite? XD)
"ငါသိချင်ရင်တစ်ယောက်ယောက်ကဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာရှင်းပြမယ်ဆိုရင် LibreOffice 3.6 မှာ Gnome မဟုတ်ဘဲ KDE interface ရှိရမယ်"
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ LibreOffice ဟာ JAVA ဖြစ်လို့ပါ။ အသံကရုပ်ဆိုးပါတယ်။
မကြာသေးမီက Kaza သည် LibreOffice ကို KDE SC နှင့်မည်သို့ပိုမိုကောင်းမွန်စွာပေါင်းစည်းရမည်ဆိုသည့် post တစ်ခုရေးသားခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းကိုငါရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ သင့် Blog blog ကိုစစ်ဆေးရန်သင့်အားအကြံပြုလိုပါသည်။
သင်တို့ထဲမှအချို့အတွက်လက်ခံရန်ခဲယဉ်းသော်လည်း၊ Ribbon သည် Microsoft ၏အခြားနေရာမှမဟုတ်လျှင်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ခဲ့သည့်အရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခုတော့ငါလေးလံသောအသံသို့မဟုတ်ဘာမှမဖြစ်လိုဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ post တစ်ခုမှာဥပမာ Micro $ oft ကိုမသုံးသင့်ဘူးလို့ငါထင်တယ်၊ ဒါကအကြံပြုချက်ပဲ။ Güindous, Winbugs, Micro $ oft သို့မဟုတ် Microshit XD ရေးသားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက်ပျော်စရာဖြစ်သော်လည်းအလေးအနက် post တစ်ခုတွင်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာအကြံပြုချက်တစ်ခုပဲ။ ခင်ဗျားတို့ကိုသူတို့နာမည်နဲ့ခေါ်ရမယ်။
အခုတော့ interface ပြောင်းလဲမှု၊ လူတွေအသုံးပြုခြင်း၊ ပိုကောင်းတဲ့ပေါင်းစည်းမှုနဲ့ icon တွေရဲ့အပြောင်းအလဲနှစ်ခုစလုံးဟာကျွန်တော့်အတွက်အလွန်ကောင်းနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်ကိုကြည့်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးတယ်။
ငါလိုက်နာပါ, မှတ်ချက်များအတွက်ကုမ္ပဏီကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိအမည်ရှိ, သွားနှင့်သွားပေမယ့်မည်သည့်ဆောင်းပါးအတွက်ကြောင်းလမ်းအမည်ဖြင့်ကြောင့်အမျိုးအစားအလိုအလျောက်ဆုံးရှုံးစေသည်။
ထို့အပြင်၊ စာအား 's' အစား $ နိဂုံးကို အသုံးပြု၍ ကုမ္ပဏီအားအရည်အချင်းမပြည့်မှီခြင်းသည်မိုက်မဲရာဖြစ်သည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ကုမ္ပဏီမဟုတ်၊ ကုမ္မဏီတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်၎င်း၏အဓိကနှင့်နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်မှာရှယ်ယာရှင်များအားခွဲဝေချထားပေးခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် နှင့်အရာများအတွက်ကုမ္ပဏီတည်ရှိသည်, ကမ္ဘာတဝှမ်းအမျိုးမျိုးသောအမျိုးမျိုးသောကုမ္ပဏီများသည်သန်းပေါင်းများစွာ၏ကျန်ကဲ့သို့စီးပွားရေးအမြတ်အစွန်း။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ရိုးရိုးသားသားစီးပွားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့၎င်း၏လည်ပတ်မှုစနစ်များသည် GNU / Linux သို့မဟုတ် BSDs နှင့်နည်းပညာအရမတူပါ။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီများနှင့်ကုမ္ပဏီများရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါဖမ်းဆီးရမိသောပရိသတ်များထုတ်လုပ်ရန်ရှာသည်။ ဆန်းသစ်သောနည်းပညာများသည်၎င်းတို့ကို ၀ ယ်ယူရန်နှင့်ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏အရင်းအမြစ်များကိုစုပ်ယူခြင်းအားဖြင့်ကုမ္ပဏီများအားဖျက်သိမ်းခြင်းအားဖြင့်စာကိုအများပြည်သူသိရှိအောင်ပြုလုပ်ရာတွင်ဒီဇိုင်းအားဖြင့်အားနည်းသောဆော့ဖ်ဝဲများပြုလုပ်ရန်ကွန်ပျူတာ (အတွင်း) လုံခြုံရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်မသင့်တော်သောစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ Agnitum Software သည်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်အား ၄ င်း၏ Vista စနစ်၏လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆူပူအုံကြွမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကွန်ပျူတာစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးပျောက်ကွယ်သွားစေရန်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကိုချိန်ခွင်လျှာညှိရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
ဘဏ္ာရေးအရမိုက်ခရိုဆော့သည်သာမန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏စတော့ရှယ်ယာသမိုင်းကိုကြည့်ရုံမျှနှင့်အမြောက်အများနှင့်ချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးအက်ပဲလ်၏ပန်းချီကားအနည်းငယ်မှာ - သို့မဟုတ်ဂျော့ဘ်စ်ကိုတည်ထောင်စဉ်ကဖြစ်သည်။
Ballmer သည်သူ၏ကျော်ကြားသောပို့ချချက်များကိုမည်သူမဆိုတွေ့မြင်ခဲ့ဖူးပါသလား။ ကောင်လေးက snorting ထဲဝင်လာတယ်။ သူက cowboy ဦး ထုပ်နဲ့မြင်းနှစ်ကောင်ပျောက်နေတယ်။ ၅ မိနစ်အကြာမှာသူဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့ချွေးစေးအင်္ကျီနဲ့ချွေးစေးနေပြီးအရူးမျက်နှာနဲ့အရူးမျက်နှာ၊ သူကမျက်နှာရှည်ရှည်နဲ့ ၅ ကြိမ်ထဲက ၁ ခုကိုအောင်ပွဲခံတယ်၊
ကုမ္ပဏီ၏အကြီးအကဲကကုမ္ပဏီ၏အတွင်းပိုင်းကိုမည်သို့လှုပ်ရှားသည်နှင့် Ballmer သည်ယနေ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်စက်ဆုတ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုများစွာပြောခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Microsoft နှင့်အထူးသဖြင့် Ballmer သည် GNU / Linux ကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တစ်ဝိုက်တွင်ကွန်မြူနစ်ဝါဒီများအဖြစ်စတင်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားရေးအန္တရာယ်၊ သေသည်အထိတိုက်ခိုက်ရန်လိုအပ်သည်၊ အထက်လွှတ်တော်အမတ်နှစ် ဦး ကိုသူတို့ခုခံအားကျောထောက်နောက်ခံမှလဲကျအောင်ကူညီနိုင်ခဲ့သည် - p
ယနေ့ Windows Azure သည် GNU / Linux ဆာဗာများကို၎င်း၏အဆင့်မြင့်ဝန်ဆောင်မှုများတွင်ပေးသည်
အခုတော့မိုက်ကရိုဆော့ဖရဲ့ကျဆုံးသွားပြီ။ ဘာစဉ်းစားရမှန်းမသိတော့ဘူး။ တစ်ဖက်တွင်၎င်း၏ Windows operating system ကိုအများဆုံးအသုံးပြုသော်လည်းအခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ဤစနစ်၏ပျမ်းမျှသုံးစွဲသူများ၏ ၇၀% သည်လိုင်စင်အတွက်မပေးချေ။
တစ်ဖက်တွင် Nokia ၌မဟာမိတ်အဖြစ်ရှိသည်။ သို့သော်အခြားတစ်ခုမှာ Android သည်အခြားမိုဘိုင်းဖုန်းများတွင်ရှိသည်။
CES 2013 တွင် "ရိုးရှင်းသောအဆိုပြုချက်အသစ်နှင့်ထိတွေ့နိုင်သောကိရိယာများအတွက်အကောင်းဆုံး" အနေဖြင့်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်အားစတင်မိတ်ဆက်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းသည်ဆမ်ဆောင်းဖန်သားပြင်များတွင်အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်များကိုပေးနေသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုတာဝန်မယူပါ။ Windows7ပါ။
ကုမ္ပဏီအတွက်တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀ င်ငွေသည် Xbox နှင့် Halo တို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ပေါင်းစပ်ခြင်းကိုတောင်ကြိုက်သည်။
ငါအမှန်တရားမသိဘူး၊ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကျလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် Windows ဟာအသုံးအများဆုံးလည်ပတ်ရေးစနစ်အနေနှင့်ကျလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
Samsung ၏ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိမကောင်းသည့်ပိတ်ထားသောအနက်ရောင်ဖန်သားပြင် "My error," ဆိုနီဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ရှိသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ XP pirate ကိုခွင့်ပြုခြင်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာမှီခိုမှုကိုဖန်တီးရန်၎င်း၏ software package များ၏အခမဲ့လိုင်စင်များကိုနည်းပညာဆိုင်ရာမှီခိုမှုဖန်တီးရန်မဟာဗျူဟာများ + HW ထုတ်လုပ်သောကုမ္ပဏီများနှင့်သဘောတူညီချက်များမှယနေ့အချိန်၌ပင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဟုတ်သောပစ္စည်းအများစုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ Windows XP ကို ​​IE6ဖြင့်လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်ရာစားသုံးသူစျေးကွက်တွင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကြီးမားစွာသွင်းထားခြင်းခံရသည်။
Xbox … fuck ဆိုတဲ့မိခင်ကအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ် !!! Sony PS3 လိုပဲ၊ အခြားပင်လယ်ဓားပြများကဲ့သို့! xD
console ကိုအချိန်အကြာကြီး ၀ ယ်ချင်ခဲ့ပေမယ့်ဒီကုမ္ပဏီနှစ်ခုထဲကိုငါ့ပိုက်ဆံမပေးဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်
Piston သို့မဟုတ်အနာဂတ်တွင် Steam console ဟုခေါ်သည်ဖြစ်စေ၊ GNU / Linux, Ubuntu ကိုအသုံးပြုထားသောဂိမ်းစက်တစ်ခုသည်ရောက်ရှိရန်ကြာမြင့်စွာမမျှော်လင့်နိုင်ပါ။
ကျွန်တော့်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကကျေးဇူးပြုပြီးညှပ်ပေးပါ။ : D: D: D
ကျနော့်အမြင်အရဖဲကြိုးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နေရာများစွာခိုးယူသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဒေါင်လိုက်လိုင်းများ (၎င်းတို့ကိုရေတွက်လျှင်၊ ဝစ်ဂျက်အိုင်ကွန်များနှင့်အခြား ၆ လိုင်းရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာမီနူးမှ၊ တက်ဘလက်များတွင်အရေးကြီးသည်သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများ၏မြင်ကွင်းကိုယဇျပူဇျောရာ status bar ကို) ။
ငါ Ribbon ကိုသုံးတဲ့ mockup မှာမြင်ရတာကိုမစွန့်လွှတ်ဘူး။
ငါသဘောတူတယ်။ interface ကိုပြောင်းလဲရန်မလိုအပ်ပါ။ ငါ G + မှာပြောခဲ့သလိုပဲကုန်ထုတ်စွမ်းအားဆိုင်ရာမေးခွန်းဖြစ်တယ်၊ ဥပမာမိုက်ခရိုဆော့ကနေဒီအပြောင်းအလဲတွေကကျွန်တော့်ကိုသူတို့ကိုပိုပြီးမုန်းတီးစေတယ်။ M $ ၏နောက်ဆုံးမျက်နှာပြင် (သူတို့အကြောင်းကြာမြင့်စွာပြောနေခဲ့ကြသောကြောင့်) ပြုလုပ်သည်မှာအချိန်များစွာဖြုန်းတီးခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတကယ် LibreOffice interface ကိုနှစ်သက်တယ်၊ အဲ့ဒီလိုပဲနေသင့်တယ်။ Ubuntu တွင်၎င်းသည် Global Menu နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်စွာပေါင်းစပ်ထားသည်။ သူတို့အကြီးအကျယ်အပြောင်းအလဲတွေလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်
icon များကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်၎င်းကို KDE နှင့်ပိုမိုပေါင်းစည်းမှုပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ပျော်ရွှင်သည်။ အပြောင်းအလဲများအတွက်လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။ interface ကိုပြောင်းလဲရန်တောင်းဆိုသူများကိုကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမနားလည်ခဲ့ပါ။
Libreoffice ကိုကြည့်ဖို့တစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ငါထင်ရင်ငါယေဘုယျအားဖြင့်သဘောတူတယ် အထက်ဖော်ပြပါအချက်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော Desktop နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်မှသာလျှင် reengineering လုပ်ရန်မရည်ရွယ်ပါ။ ၎င်းသည် GTK ကန့်သတ်ချက်များသို့မဟုတ်အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ရှုထောင့်မှကြည့်ပါက desktop ၏အသွင်အပြင်နှင့်ခံစားမှု suite တွင်ပေါင်းစပ်ထားကြောင်းကျွန်ုပ်စဉ်းစားပါ။
ဖဲကြိုး၏စိတ်ကူးသည်မှန်ကန်ပြီး menus များရှိခြင်းသည်လည်းကောင်းမွန်သည်မှန်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်အနည်းငယ်ခေတ်နောက်ကျသည်ဟုထင်ပါသည်။ နောက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော့်အရာတွေကိုကြည့်နေတုန်း PC 486SX 33 Mhz, windows 95 နဲ့ Office 95 ကိုတွေ့လိုက်တယ်။ Office 95 Libreoffice ကိုတွေ့တော့အမှန်တရားကိုသတိရမိတယ်။
ဝမ်းနည်းစရာမှာ libreoffice သည် MS Office 2003 ကိုပြန်လည်အမှတ်ရစေသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ msx နှင့် Blaire Pascal တို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုကျွန်ုပ်အလွန်သဘောတူပါသည်။ Guindous သို့မဟုတ်အခြားဥပမာများကဲ့သို့သောအရာများကိုအမည်မဖော်ပြသင့်ပါ။ post သည်ဤကဲ့သို့သောမကောင်းသောအရာနှင့် LibreOffice ကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောဆော့ဝဲလ်အကြောင်းပြောသောအခါပိုများသည်။
LibreOffice နှင့် ပတ်သက်၍ မူ ၀ န်ခံရန်ခက်ခဲသော်လည်း Microsoft ရှိ၎င်း၏ Ribbon ၌ရုံး၌အသုံးပြုသော Ribbon သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ ငါ LibreOffice နှင့်ဆင်တူပါသည်။ Office suites ကိုအသုံးပြုသည်။ interface သည်ဝါကြွားသော်လည်းသင်၏ menus အသစ်များကိုမပြသောအခါသို့မဟုတ်အနီးအနားရှိရွေးချယ်စရာများရှိလျှင်အလုပ်လုပ်ရန်ပိုလွယ်ကူသည်။
ငါကလူအကြောင်းကိုအလွန်ကောင်းစွာမြင်ပေမယ့်ငါနေဆဲ interface ကိုတစ် ဦး အပြောင်းအလဲမျှော်လင့်ပါတယ်, ဤသည်၎င်း၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်မယ်လို့ပေမယ့်, ငါက extension များပေါ်တွင်ဤမျှလောက်မှီခိုဖို့မလိုချင်ပေမယ့်တချို့လုပ်ဖို့ extension များဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ရှိသည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပါသည်, ငါမကြိုက်ဘူး ပျော့ပျောင်းသောတစ်ဝက်ကိုစွန့်ခွာခြင်းနှင့်အခြားသူများသည်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများကိုချဲ့ထွင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဟူသောအတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။
Offtopic - ကျွန်ုပ်သည်လွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအသိုင်းအဝိုင်းကိုဆန့်ကျင်စွာသုံးလေ့ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်၊ သို့သော်ကမ္ဘာကြီးကကျွန်ုပ်ကိုအမြဲဆွဲဆောင်သည်၊
ကောင်းပြီ၊ နောက်တစ်ခါငါ op-ed လုပ်တဲ့အခါ၊ အရာတွေကိုနာမည်နဲ့နာမည်ပေးမယ်။
+ 100 ... ဆောင်းပါးအရ၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရ၊ သင်ပိုမိုအာရုံစိုက်သင့်သည့်အရာမှာ LibreOffice ၏ပေါင်းစည်းမှုကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်၎င်းကိုလည်ပတ်ခြင်းကိုသုတ်သင်ရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် အကယ်၍ သူတို့သည် user interface ကိုပြောင်းလဲလိုပါကအနည်းဆုံးလက်ရှိ interface သို့ပြန်သွားနိုင်သည့် option ကိုချန်ထားပါ။ သို့မှသာအသုံးပြုသူများသည်၎င်းကိုဆက်လက်သုံးနိုင်သည်။ "အလေ့အထ" ပြproblemနာထက်ပိုပြီး၎င်းသည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားပြissueနာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် interface အသစ်၏သင်ယူခြင်းကန ဦး အဆင့်တွင်သေချာပေါက်လျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်သည် Linux ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် operating system မ်ားကို programmer မဟုတ်သူတစ် ဦး ၏အမြင်ဖြင့်ကြည့်သည်။ အကယ်၍ လုပ်ငန်းခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကသာသာသာသာကောင်းမွန်လျှင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား
တိုး။ ပတ်ဝန်းကျင်သည်အဘယ်ကြောင့်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သနည်း။ Microsoft Office ဟာသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကအကောင်းဆုံးမဟုတ်ပေမယ့်လည်းမျက်လုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှာပါ။ LibreOffice သည်အလွန်သာလွန်သော်လည်းနူးညံ့သောအရောင်များဖြစ်သောခေတ်မီဒီဇိုင်းများနှင့်လည်းကောင်းမွန်သည်။ အရာအားလုံးမှရန်လာပြီဖြစ်ပါတယ် ငါရုံး 2003 သုံးပြီးခဲ့သည်
perfectlyုံနားလည်သဘောပေါက်။ ဖဲကြိုးရောက်ရှိလာခဲ့တယ်၊ Libreoffice သည် Office 2003 နှင့်တူသည်၊ အရာအားလုံးမှရန်လာပြီဖြစ်ပါတယ်
ငါဆောင်းပါးနှင့်လုံးဝသဘောမတူ။ Office 2007 bar ကိုသူတို့မြင်သောအခါမည်သူမျှမကြိုက်ပါ၊ အနည်းဆုံး linuxers များဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အလုပ်မှာငါကအသုံးပြုရမယ်၊ ၎င်းသည်အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အသုံးအများဆုံးရွေးချယ်မှုအားလုံးသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံစံချခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည် (ဇယားတစ်ခု ဖန်တီး၍ ရွေးချယ်စရာများကိုကြည့်ပါ၊ ထို့နောက်ပြောပြပါ) ။
ငါ LibreOffice ကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒီအရက်ဆိုင်တွေကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်။
ဤအချက်နှင့် ပါတ်သက်၍ တန်ပြန်ရေးရန်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောမှတ်ချက်များပေးသော Mr. MSX အတွက်ကျွန်ုပ်မဲပေးလိမ့်မည်။
Office 2007 bar ကိုသူတို့မြင်သောအခါမည်သူမျှမကြိုက်ပါ။ အနည်းဆုံး linuxers များသာဖြစ်သည်။
ငါလှိုင်းကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ အဲဒါကိုငါစသုံးတဲ့အချိန်မှာပတ္တာတစ်ခုလို၊ Windows for Workgroups (Windows 3.11) မှ W95 သို့သွားသည်။ လူတိုင်းသည်ပြုတ်ထားသောနို့ကဲ့သို့ခုန်ပေါက်ခြင်းဖြစ်သည်။ (က) ပြောင်းလဲမှုကိုတိုင်းတာရန်အချိန်နှင့်ခ) အပြောင်းအလဲကိုသိမ်းပိုက်ရန်ကြိုးစားရမည့်အချိန်ပင်မလိုအပ်ဘဲအရာဝတ္ထုတစ်ခုအားဓမ္မဓိjudge္ဌာန်ကျကျဆုံးဖြတ်ရန်နှစ် ဦး စလုံးမရှောင်လွှဲနိုင်ပါ။
ထို့နောက်အခြားအနာဖြစ်ခြင်း - အကယ်၍ ၎င်းသည်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါက၎င်းသည် berreta-by-design ဖြစ်သည်။ သတိထားပါ (သတိထားပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအလေ့အကျင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီကိုပထမဆုံးဝေဖန်သူဖြစ်သည်) ။
၎င်းသည် systemd PID1 အဖြစ် systemd ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် dev's များမှဝေဖန်မှုပိုမိုများပြားလာခြင်းကြောင့် Arch ၏စာရင်းများတွင်မကြာမီကဖြစ်ပွားခဲ့သော putery နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည် အသားအရောင်ခွဲခြားသုံးစွဲသူများ၏စိတ်ကူးများနှင့်ဝုန်းဒိုင်းကြဲကျော်လွန်။
ကံကောင်းတာကကံသစ်တစ်ခုက F / LOSS သူရဲကောင်းများရဲ့အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်သမိုင်းမတိုင်မီကလူများစွာရဲ့ထိတ်လန့်စရာအဖြစ်မခံနိုင်သောဒဏ္myာရီများနှင့်ပါရာဒိုင်းများကိုတဖြည်းဖြည်းဖြိုဖျက်နိုင်ခဲ့သည်။ >: - D
မှတ်မိသေးတယ်။ touch 8 devices တွေပေါ်မှာ Windows XNUMX ဆိုတာ BOMB ပါ။ ဗေဒင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေ (သူကိုယ်တိုင် Metro ကိုကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်) အပြင်ဘက်ကအဆင်ပြေလွယ်ကူပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပါ။ WOOOOOW၊ ချိတ်ထားတယ်၊ အရမ်းသုံးရတာအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ထိတွေ့ကိုင်တွယ်နိုင်သည့် iPad များ၊ iPads တွင်တွေ့ရသော iOS နှင့်အလွန်ထူးကဲသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အားနည်းချက်တစ်ခုရှိသည်။ MS ထုတ်ကုန်အားလုံးကဲ့သို့အလှအပသည်အများအားဖြင့်မျက်နှာပြင်ကိုရည်ညွှန်းသည်
ပထမဆုံးပြproblemနာက MS သည် Apple နှင့် Facebook တို့၏ခြေရာကိုနင်းပြီးသူတို့၏ပလက်ဖောင်းကိုပိတ်ပြီးကိုယ်ပိုင်ဂေဟစနစ်ကိုဖန်တီးသည့်အခါဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့် iPad နှင့်မဆို Windows 8 နှင့်ထိတွေ့နိုင်သောမည်သည့် touch device ကိုမဆိုအလွန်အမင်းကန့်သတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောကိရိယာများကိုသာအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားပြီး၊ မည်သည့်ဟက်ကာမျှသုံးနိုင်သည်။
ဒုတိယပြproblemနာက Windows 8 အောက်တွင်နှင့် kernel အသစ်နှင့်သက်ဆိုင်သော API တို့အကြား Microsoft ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူတူပင်မြင်ကွင်းကျယ်တူညီနေခြင်းဖြစ်သည်။ Sponge) နှင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်ဆင့်တွင်တီထွင်ထားသောတတိယပါတီနည်းပညာများကိုရယူခြင်း၊ အင်ဂျင်နီယာဌာနများသို့ပစ်ချခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုလက်ရှိထုတ်ကုန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းတို့ကိုကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒအစဉ်အဆက်အမွေဆက်ခံခြင်းနှင့်အပိုင်းအစများပြိုကွဲခြင်းစသည့်အခြေအနေမျိုးတွင်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်နှစ်ပတ်အတွင်းအဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်အတိုင်း။
ဤရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် Android သည်သာလွန်ထူးခြားသည်။ ၎င်းသည်အကြီးအကျယ်ပြုပြင်ထားသော Linux kernel ပေါ်တွင် Java (Dalvik) အလုပ်လုပ်သည်။
Tizen, FirefoxOS, PlasmaActive4(Mer တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ MeeGo ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၊ 100% SL !!!)
hacking ၏အနာဂတ်တစ်ခုလုံးသည်ငါတို့ကိုစောင့်နေသည် =)
Metro ရဲ့မကောင်းတဲ့အရာကငါ desktop ပေါ်မှာအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲ။ များစွာသောသူတို့က Windows ကိုမုန်းတီးတဲ့ linuxers တွေလို့ပြောကြတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့ laptop မှာနေ့တိုင်းသုံးဖို့ (အနည်းဆုံးတော့ငါ့အတွက်) တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါ Windows ကိုသုံးရင် Windows7နဲ့ကပ်လိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်၊ မင်းပြောတာကိုငါသဘောတူတယ် ဥပမာအားဖြင့်၊ Gnome2မှ Gnome3(DE and Shell) သို့ပြောင်းလဲမှုသည်အလွန်ရုတ်တရက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်သည် metro ကိုသာတောင်းဆိုခြင်းမရှိသော်လည်း၊ သင်သိသည်မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ အသုံးပြုသူများသည်အနည်းငယ်မျှသာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။ gusto သည် Unity ကဲ့သို့မြေပြင်ပေါ်တွင်ဝေဖန်မှုများနှင့်ဘလော့ဂ်များနှင့်ဖိုရမ်များတွင်သွေးများစွာစုဆောင်းထားသည့် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် Natty မှသုံးစွဲသူများကိုဆွဲဆောင်သည်။ အဆုံးမဲ့ဖြစ်ရပ်များကိုကျွန်တော်ပြောနိုင်သည်။ ဥပမာ KDE 2011 မှ 3၊ Python4မှ Python 2၊ DesdeLinux called နှင့်အခြားလူကြိုက်များသောစာမျက်နှာမှ themes အသစ်များ။ သို့သော်အပြောင်းအလဲသည်ကောင်း၏။ Arch နဲ့စတင်ခဲ့တယ်၊ သူတို့မှာ Systemd ရှိပြီးသား၊ ယခုငါ installation လမ်းညွှန်များကိုနှိုင်းယှဉ်သည်။ Systemd သည်အစပိုင်း၌တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် daemons များကိုပိုမိုရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် (ငါသာလျှင် configuration file အဖြစ် rc.conf ရှိလိုသော်လည်း) နှင့်အခြားအရာများ အရာပိုကောင်းဘို့ရှိကြ၏။
Metro သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအရည်အချင်းရှိပြီးလှပသောပုံရသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်၎င်းကိုအနည်းငယ်တွန့်ဆုတ်နေခဲ့သော်လည်းတည်ငြိမ်သော desktop နှင့်တည်ငြိမ်သောဖြန့်ဖြူးသော hahaha ၏ post အရ၎င်းကိုငါ (desktop ပေါ်တွင်သာ) ရွံမရွိပါ။ ဖဲကြိုးမဟုတ်ဘဲအကောင်အထည်ဖော်မည်ဆိုပါကနောက်ထပ်ကြီးမားသောဝုန်းဒိုင်းကြဲမှုများဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ဆက်စပ်မီနူးထက် ပို၍ ခေတ်မီသောအရာဖြစ်သည်။
Heh, "Office 2007 bar ကိုဘယ်သူမှသူတို့မတွေ့ခဲ့ဘူး၊ Linux သုံးစွဲသူများထဲမှအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ " သူတို့မကြိုက်တာကလုံးဝမှန်တယ်၊ Microsoft Office 2007 အခင်းအကျင်းကဆိုးတာပဲ။ MS Office 2010 ကတည်းကအရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအရာအားလုံးကို“ သန့်ရှင်း” အောင်လုပ်တဲ့အတွက်ငါမသိဘူး။
"ငါ့အရသာအတွက် Metro ရဲ့မကောင်းတဲ့အရာကငါ desktop ပေါ်မှာအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းပဲ။ များစွာသောသူတို့က Windows ကိုမုန်းတီးတဲ့ Linux သုံးစွဲသူများရဲ့စကားပြောကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ (အနည်းဆုံးတော့ငါ့အတွက်) ဒါကိုနေ့တိုင်းသုံးဖို့ငါ့ရဲ့ laptop မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါ Windows ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် Windows7နဲ့နေလိမ့်မယ်။
လုံးဝဖြစ်ပါက Metro သည်နေ့စဉ် Desktop ပေါ်တွင်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုမတွေးလိုပါ။ Metro သည်ထိတွေ့ပစ္စည်းများအတွက်သီးသန့်ဖြစ်သည်။
Desktop ကြီးများနှင့် laptop touchmonitor များတွင် Windows 8 ကိုအသုံးပြုရန်တကယ်အဆင်ပြေလျှင်မဟုတ်လျှင် (ဖြစ်နိုင်သေးသည်) ကျွန်ုပ်သည် Metro ကိုလက်ဖြင့်လှုပ်ခြင်း၊ အလိုရှိသော tile ကိုရွေးပြီးသင်၏လက်ကိုလှည့်ခြင်းကလက်တွေ့ကျနိုင်သည်။ ကီးဘုတ်ပေါ်ကအနားယူရာသို့အလိုအလျောက်။
Sancho အခေါက်, ငါတို့တိုးကြောင်းအချက်ပြ!
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါ့ကိုနှစ်သက်သောတစ်ခုတည်းသောအပြောင်းအလဲက၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုပထမ ဦး ဆုံးမှာသိသာမဟုတ်ပါသော်လည်း, ဖြေရှင်းနည်းများသို့မဟုတ်အမြင်များကိုအသစ်သောထောက်ပံ့မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်တော့အတော်အတန်ရှေးရိုးစွဲဆန်လှပါတယ်။ လူသိများတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောခဲ့တာက "သတင်း၊ သတင်းကောင်းမရှိ။ "
"ငါသည် Arch ကိုနှောင်းပိုင်းတွင်သူတို့စနစ်တကျရှိခဲ့ပါတယ်,"
ငါ systemd ဖို့အပြောင်းအလဲလုပ်သောအခါ, ငါ့ system ကိုသုံးနှစ်နီးပါးတပ်ဆင်ထားခဲ့ - ယခုငါကစဉ်းစားယခု, ဒါဟာအထင်ကြီးဖြစ်ပါသည်, အချိန်တွေအများကြီး wow!, တူညီတဲ့စနစ်အတွက်ဖြစ်ပျက်သောလေးနက်သောအပြောင်းအလဲ, ကမ္ဘာပေါ်မှာငါ့အသက်ကိုနှင့်အဲဒီမှာကဆက်လက်။ ကျောက်၊
ဖိုရမ်များ၊ ဘလော့ဂ်များနှင့်စာပို့စာရင်းများရှိစာရွက်စာတမ်းများနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောပို့စ်များကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်ဘာသာရပ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးနောက် systemd သည်ရင့်ကျက်ပြီးပြproblemsနာမရှိဘဲရွှေ့ပြောင်းသွားသည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။
အခြားအလှည့်အပြောင်းများတွင်အလားတူအရာတစ်ခုကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါသလား။ အမှန်တရားကကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ကိစ္စကိုမျှမသိသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ လုံခြုံစိတ်ချရသော patch မှလွဲ၍ မည်သည့်အခါမျှထိတွေ့ခြင်းမရှိသော Desktop များ မှလွဲ၍ မည်သည့်အခါမျှထိတွေ့ခြင်းမရှိပါ။ ငါ <3 Linux ကို Linux!
"အစမှာ daemons (ငါ rc.conf ကို configuration file တစ်ခုအနေနဲ့သာကြိုက်ချင်ပေမယ့်) နဲ့ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ "
ဒါဟာလှပတဲ့လူ၊ ဝေါ့ဇ်တစ်လက်ပါ။ ကျွန်တော်ဘဲလေးကိုမကြိုက်ဘူး။ စင်ကြယ်သော၊ ရှင်းလင်းပြီးသပ်ရပ်သော /etc/rc.conf ၌သင်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုအဆင့်အနည်းငယ်ဖြင့်သာတည်ဆောက်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့် Arch ၏ဒီဇိုင်းရိုးရှင်းမှုကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
systemd သည် startup စနစ်ဟောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခေါင်းတစ်ရာရှိသည့်နဂါးဖြစ်သော်လည်းလက်တွေ့တွင် (က) ၎င်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်သည်၊ လက်တွေ့ကျကျဘာမဆိုလုပ်နိုင်သည်၊ (ခ) အလွန်အမင်းစွယ်စုံနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော်လည်းဤကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးသောဆော့ဖ်ဝဲလ်တိုးတက်မှုများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်တွေ့ရခဲသည်။ အရမ်းလက်တွေ့ကျပြီးသန့်ရှင်းသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်၏လက်ဖ ၀ ါးတွင်ပါဝါများစွာရှိပြီးနောက် initscripts ကိုမရူးတော့ပါ။
inetcripts (/etc/rc.conf အပါအ ၀ င်) သည်အလွန်ချစ်စရာကောင်းသည့်ကျေးလက်ဒေသ၊ တောင်တန်းနှင့်ကမ်းရိုးတန်းရှုခင်းများဖြစ်သဖြင့်အလွန်ရိုးရှင်းလှ၏။
systemd သည်ကြွေပြားများပင် IPv6 ဆက်သွယ်မှုရှိသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအားသာချက်များနှင့်ပြproblemsနာများမရှုပ်ထွေးသည့်အပြင်လေထုသန့်ရှင်းမှု၊ ကြီးမားသောစိမ်းလန်းသောနေရာများနှင့်အချိန်များစွာရှိသောလူများ
/etc/rc.conf သည် Porsche ဖြစ်ပြီး systemd သည် Transformer တစ်ခုဖြစ်သည်။
သူတို့ကဖဲကြိုးမဟုတ်ဘဲအကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကနောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ဝုန်းဒိုင်းကြဲမှုဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် context menu ထက်ပိုပြီးခေတ်မီတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ "
တစ်ချိန်တုန်းက LibreOffice အတွက်တိပ်ခွေမျိုးကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပြောတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါ့မှတ်ဉာဏ်ကငါ့ကိုမအောင်မြင်ဘူး၊ ဒါကလှောင်ပြောင်ရုံပဲ။
ဝုန်းဒိုင်းကြဲရန်မူအပြောင်းအလဲသည်ပိုကောင်းသည်၊ ချန်လှပ်ပါ၊ ခေတ်မမီတော့သောသို့မဟုတ်သက်သောင့်သက်သာရှိသောသူများလည်းရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သာလွန်ကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုခုကိုမွေ့လျော်ခြင်းမရှိဘဲကြွင်းသောအရာကိုဆက်နေမည်မဟုတ်ပါ။
သိသာထင်ရှားတဲ့နည်းပညာအသစ်တွေနဲ့ပါရာဒိုင်းအသစ်တွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးလာတာနဲ့အမျှဆက်စပ်မှုရှိလာတဲ့လေ့လာသင်ယူမှုကွေးကပိုကြီးလာတာနဲ့အမျှအဟောင်းတွေဟာပိုမိုမြင့်မားလာတယ်။ ဒါပေမယ့်နည်းပညာဆိုင်ရာဒိုင်နိုဆောတွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုမယ်ဆိုရင်အာကာသယာဉ်တွေအစားမိုဘိုင်းဖုန်းကိုစီးနေ ဦး မှာပဲ။ ။
တနည်းကား, ပယ် fuck ဆိုတဲ့။
MS Office 2010 မှစ၍ အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားသည်၊ ကျွန်ုပ်မသိသည်မှာသူတို့အားလုံးလုပ်သကဲ့သို့သန့်ရှင်းသည်။
အကယ်၍ အပြောင်းအလဲအချို့သည် X အကြောင်းပြချက်များအတွက် F / LOSS တွင်နှစ်အနည်းငယ်ကြာအောင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်လျှင်၊ အမျိုးမျိုးသော developer များများစွာရှိပါကသတ်သတ်မှတ်မှတ်အစီအစဉ်များနှင့်အရင်းအမြစ်များအကန့်အသတ်ရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွင်း၌ဖြစ်ပျက်နေသောအရာအားလုံးကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။
Jueeee, မင်းမှာအရေးအသားလက်ဆောင်ပါ၊ ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယများကိုစတင်ရေးသားသင့်သည်။
ငါမသိဘူး၊ ဒီဟာကနှစ်နဲ့ချီပြီးပါဝင်ပတ်သက်တာနဲ့ငါပြောနေတာကိုငါတကယ်သိတယ်၊ ငါမသိတဲ့အရာတွေကငါဝါးနေတဲ့အရာအားလုံးကိုတောင်းမယ့်အစားငါသာဓကဖြစ်တယ်လို့ငါထင်တယ်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့အင်တာနက်ပေါ်တွင်ကြွယ်ဝသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျင်းရိခြင်းနှင့်သည်းခံမှုကင်းမဲ့ခြင်းကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ လွတ်လပ်သောလွတ်လပ်ခွင့်ဟုထင်မြင်ယူဆရသောမည်သည့်တီထွင်ကြံဆမှုများကမှ စတင်၍ လိုချင်သူများအတွက်အဓိပ္ပာယ်မဲ့သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်မည်သည့်အကြံအစည်ကိုမဆိုရေးသားသည့်နေရာတွင်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအရေးအသားများကိုအမှန်တရားအဖြစ်အမှန်တကယ်လေ့လာပြီးယင်းတို့ကိုမသိဘဲနေခြင်းအားဖြင့်ယူပါ။
ဒါ့အပြင်ဒီနယ်ပယ်မှာသာမကယေဘုယျအားဖြင့်တူညီတဲ့အနတ္တတူညီချက်ကိုငါအကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ဖူး၊ ကြားဖူးတယ်ဆိုတာသင်သိပါသလား။ အများစုမှာကြောင်ပြိုင်ပွဲတွင်နေထိုင်ကြပြီး၎င်းသည်ဘီးပေါ်ရှိသမင်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ msx ကိုသင်တန်ပြန်ဆောင်းပါးတစ်ခုပြုလုပ်သင့်သည်ဆိုလျှင်သင်၏မှတ်ချက်များသည်အလွန်ကောင်းလွန်း။ မှတ်ချက်များတွင်သာကျန်တော့မည်။
ကြည့်ရှုပါ၊ ခင်ဗျားရဲ့စာမူဟာပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ထင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်တစ်ခုကဘလော့ဂ်စာဖတ်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အရသာကိုအငြင်းပွားစရာဖြစ်စေတယ်။
ဆောင်းပါးတန်ပြန်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအင်ဂျင်နီယာကသင်၏သဘောထားကိုကျွန်ုပ်သဘောမတူပါ။ အကြောင်းမှာဤခေါင်းစဉ်၏ဆက်စပ်မှုသည်အဓိပ္ပာယ်သိပ်မရှိလှသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၁) အာရုံစိုက်မှုကိုပြန့်ပွားစေပြီး၊ မှတ်ချက်များကိုပုံတူကူး။ သို့မဟုတ်ဆောင်းပါးတစ်ခုချင်းစီတွင်ဖြေကြားခြင်းမရှိဘဲမြင်ရလိမ့်မည်။ ခေါင်းစဉ်နှင့်စတင်ပြီး၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယမဝင်ပါ။ ၃) ခေါင်းစဉ်သည် ပို၍ အာရုံစိုက်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။
ပို့စ်တစ်ခုတည်းထားခြင်းသည်ဖော်ပြသောထင်မြင်ချက်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်သင်၏မှတ်ချက်များကိုချန်ရန် ပို၍ လွယ်ကူသည်
နေ့တိုင်း ၂ နာရီမှ ၃ နာရီကြာကျွန်ုပ်သည် Libreoffice ကိုအသုံးပြုသည်။ ငါသံသယမရှိဘဲအများဆုံးအသုံးပြုသောအစီအစဉ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ငါ crlt + alt + j နဲ့အမြဲသုံးတယ်။
ဒီတော့သင်နားလည်လိမ့်မယ်၊ အိုင်ကွန်တွေဆိုတာဂရုမစိုက်တဲ့အရာပဲ၊ ငါရေးချင်တယ်၊ အကောင်းဆုံးကိုရေးချင်တာကအဖြူရောင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုပဲ။ ငါလုပ်နေတာစာသားကနေအာရုံလွဲသွားစေနိုင်တဲ့တခြားဘာမှမရှိဘူး။ အကယ်၍ icon တစ်ခုလိုပါက၎င်းသည်“ full screen and ready” tool panel ၏ထိပ်ဘားတွင် embed လုပ်သည်။ ငါသာတ ဦး တည်းခလုတ်ကိုအသုံးပြုပါ။ ငါပြုပြင်ရန်စာသား၏အစိတ်အပိုင်းများကိုမှတ်သားရန် "ဇာတ်ကောင်နောက်ခံ"
နိဂုံး, သူတို့လိုချင်သော icon များထားကြ၏။ ငါ Writer ကိုမျက်နှာပြင်အပြည့်၌ဆက်လက်အသုံးပြုမည်။ အဟောင်း၊ အသစ်ကိုမရွေးလိုပါ။
မှတ်ချက်တွေကို (စာရေးသူက) တည်းဖြတ်စေချင်တယ်။ ကျွန်တော်အရမ်းဆိုးဝါးစွာရေးသားပြီးအမှားအယွင်းများစွာနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ ငါကနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ကကျော်သွားကြဖို့ကတိပေး။ စာသားပါအမှားများအတွက်စိတ်မကောင်းပါ။
ဤ (မှတ်ချက်များကိုတည်းဖြတ်) ကိုကြီးကြပ်သူမှသာလုပ်နိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်လိုချင်သောကြောင့်မဟုတ်ဘဲနည်းပညာအရအခြားအသုံးပြုသူများသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်မှတ်ချက်များကိုတည်းဖြတ်ရန်နည်းလမ်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါ LibreOffice (libreoffice@lists.freedesktop.org) မှ Michael Meeks နှင့်စကားပြောနေသည်။ LibreOffice အသုံးပြုသော VCL စာကြည့်တိုက်များအတွက် API ရှိသလားဟုငါမေးခဲ့သည်။ သူတို့ကငါ့ကိုမဖြေပါ။ သူတို့၌ပရိုဂရမ်မာအသစ်များအတွက်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်မျှမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုပေးသည်။ https://wiki.documentfoundation.org/Development/WidgetLayout …… .. ဒီလင့်ခ်တွင် VCL စာကြည့်တိုက်များမည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုပြသနေသည်။ http://docs.libreoffice.org/vcl/html/classes.html ..........
Interface တစ်ခုလုံးသည်ဤစာကြည့်တိုက်များပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ …အားလုံးထိပ်ဆုံးမှ၊ ဆိုးကျိုးမှာ widgets များသည် Gtk 3.6 သို့မဟုတ် Qt 4.9 တွင်မတည်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။
ဤစာကြည့်တိုက်များသည် Gtk3 နှင့် Qt 4.9 နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အဆင်မပြေပါ။ GTk3 နှင့် Qt 4.9 တွင် LibreOffice အသုံးပြုထားသောလုပ်ဆောင်ချက်မရွိပါ။
VCL စာကြည့်တိုက်များအားလုံးကို Gtk 3.6 သို့မဟုတ် Qt 4.9 နှင့်လိုက်ဖက်ညီစေရန်ပြန်လည်ရေးရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောတာဝန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် PYTHON, RUBY, WxWidgets, VALA စသည်တို့သည် developer များကသူတို့၏စာကြည့်တိုက်များကို Gtk နှင့်သဟဇာတဖြစ်စေသည်။ ၃.၆ (သို့) Qt ၄.၉ သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းသူတို့လုပ်သည်။
VCL ကို Gtk 3.6 (သို့) Qt 4.9 နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အလွန်ကြီးသောလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ထိုက်တန်သည်။
လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့စက်ကိုရေယူတဲ့အခါငါလည်းငါ့ရဲ့သောက်ရေကိုယူတယ်။ ငါ Libo အတွက် chipendilerendi သို့မဟုတ် chupiguay နည်းနည်းပိုသော interface အသစ်တစ်ခုမလိုချင်ပါ။ ငါပိုကောင်းတဲ့အင်္ဂါရပ်များနှင့်အရာအားလုံးကကဲ့သို့သောလမ်းနေဖို့ချင်တယ်။ တောင်မှ၎င်း၏ကြောက်မက်ဘွယ်သော (နှင့်အနည်းငယ်မျှသာ) အိုင်ကွန်များနှင့်အတူ။ LibO (နှင့် OOA) ၏ကောင်းမှုသည်ကောင်းသောအရာများဖြစ်သည်။ Office 95 ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ။ WordPerfect 5.1, ဒါမှမဟုတ် Lotus 1-2-3, အရာအားလုံးသည် icon များမပါဘဲမျက်နှာပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ မီနူးတစ်ခုရှိပြီးဖြစ်သည်။ mouse နှင့် screen ကို scrolling လုပ်ခြင်းသည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုပြန်လည်ခုန်တက်သွားသည်။ ငါဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုပြောဖို့သွားခဲ့ပေမဲ့ metacarpal ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကငါ့ကိုလေဖြတ်စေခဲ့တယ်။
II ကိုမက်ဒရစ်တွင်ပါတီငယ်ရွယ် Install လုပ်ပါ